Wednesday January 16, 2019 - 21:25:38 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerarkii khasaaraha badan dhaliyay ee xoogag katirsan Xarakada Al Shabaab ay ka fuliyeen magaalada Nairobi ee caasimadda wadanka Kenya.
Jason Spindler wuxuu ahaa ganacsade American ah
Weerarka oo ka dhacay dhismayaasha isku raranka ah ee Riverside ayaa sababay dhimashada dad ka badan 50 qof oo ubadan Kenyaan balse dadka weerarka lagu dilay waxaa kamid ah muwaadiniin reergalbeed ah oo u dhashay wadamada Mareykanka iyo ingiriiska.
Dadka weerarka lagu dilay waxaa kamid ah ganacsade American ah oo lagu magacaabi jiray Jason Spindler, Ninkaan ayaa madax ka ahaa shirkad caalami ah oo ka howlgasha Nairobi.
Jason Spindler waa ganacsade caan ka ah gudaha dalka Mareykanka wuxuuna horay uga mid ahaa ciidamada gaarka ah ee Mareykanka, sanaddii 2001 ayuu ka badbaaday weerarkii 11 September ee lagu burburiyay daarihii ganacsiga magaalada New York.
Weerarkii Riverside ayaa sababay jiha wareer dhan walba ah, warbaahinta caalamka waxaa qabsaday muuqaallo muujinayay rucbiga iyo cabsida ka jirtay Nairobi, waxayna Kenya markale tusaale ah in gacanta Al Shabaab ay garaacday bartamihii caasimadda.